I-Acacia Studio @ The Blue Seas
I-Acacia Studio ilula futhi inomoya futhi inikeza imibono emihle yoLwandle iTasman, i-Scamander Beach kanye ne-Scamander River. Ikhishi, i-Queen Bed, kanye ne-ensuite. Kufakiwe i-WIFI yamahhala, ukusetshenziswa kwamahhala kwedamu lokubhukuda elishisayo lasendlini kanye ne-BBQ yamahhala.
Iyimfihlo enokubukwa okuhle. Sicela uqaphele ukuthi i-swimming pool eshisayo yasendlini isetshenziswa ezinye izivakashi.
Kukhona amathilomu ahlukahlukene, isuphamakethe, usokhemisi, iposi, isiteshi senkonzo, i-newsagency kanye nosokhemisi konke okuhamba ngebanga lokuhamba. Umkhonyovu waziwa kahle ngamabhishi anesihlabathi eside esimhlophe kanye nokuphuma nokushona kwelanga okuhle. Imizuzu eyi-15 kuphela ukuya eSt Hellens nemizuzu engama-25 ukuya eBay of Fires.
Sihlala esizeni ngakho nje ucingo kude.